Usihlalo weGoodtone Imove Gaming uSihlalo- uzinzo kunye nenkxaso eguqukayo
Ababhali abaninzi beMore ngabadlala umdlalo, ke ayothusi into yokuba uninzi lwethu lukhethe izitulo zokudlala ezinje ngeGoodtone Imove chair chair endaweni yezitulo zeofisi zesintu ezisebenza. Izitulo zemidlalo zihlala zixhomekeke kude kuneyona ergonomic o ...
Imeko yesicelo sezitulo zeofisi yeGoodtone
I-Foshan Goodtone Furniture Co., Ltd, eyasekwa ngo-2014, yinkampani enobungcali kunye neFenitshala yale mihla egxile kuyilo, i-R & D, imveliso kunye nokusasazwa kwezitulo zeofisi eziphezulu. IFoshan Iifowuni yeeFenitshala zeFenitshala Co, Ltd, eyasekwa ngo-2014, yingcali ...
USihlalo weOfisi yeGreentone: Sebenza ngokukhululekileyo ekhaya
Nokuba usebenza ngoku ekhaya okanye uhleli nje iiyure ezimbalwa kulawulo lwasekhaya, ukuba nesihlalo se-ergonomic yeofisi efanelekileyo inokudlala indima ebalulekileyo, eya kuthi izenzele ngokuzenzekelayo kumsebenzisi ngamnye kwaye inike inkxaso eqhubekayo kumqolo wakho osezantsi. Njengoko sonke sisazi, hlala ...
Kumnandi Ukwenza Iifowuni
Sijonge kwisitulo esiphezulu seofisi iminyaka eyi-12. Sineemodeli ezimalunga nezili-14 zezitulo zeofisi. Ukuba unomdla kwisitulo seofisi yethu, pls zive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi. Ngokwophando olwenziwe yiYunivesithi yaseChicago, abasebenzi be-WFH basebenza iiyure ezinde. Isandi esiqhelekileyo? Ukungabikho kwe-ergo ...
Ungasikhetha njani isihlalo seOfisi esiLungeleyo?
Ukuba isitulo sakho sinamavili enziwe ngokukodwa kuhlobo lomgangatho eofisini yakho, luya kuhamba ngcono. Ukuba ayihambi kakuhle, nceda uthenge isihlalo somqamelo. Olunye lotyalo mali lubalaseleyo eofisini sisitulo, ekuvumela ukuba unciphise uxinzelelo noxinzelelo emqolo, entanyeni nasemagxeni ...
Ukucoca kunye nokuGcina uSihlalo weOfisi
Ukucoca kunye neendlela zokugcina. 1. Usihlalo weofisi yesikhumba: Nceda usebenzise isiponji esimanzi ukuba ungene emthanjeni okhethekileyo. Emva kokusula ngelaphu elomileyo, sebenzisa iarhente yokhathalelo lolusu. Ukuba usihlalo ofisi ngempazamo manzi, kufuneka wi ...
Usihlalo weOrgonomic Ofisi yoPhando lweNtengiso
Usihlalo weOrgonomic Office nguSihlalo woPhando lweNtengiso USIHLALO SIHLALO Ingxelo yakutshanje yobukrelekrele kwishishini ngusihlalo weofisi ye-ergonomic iqulethe uphando olunzulu ngobungakanani beshishini, ipateni yokuma, uqikelelo lokuthengisa ...
Ukunxibelelana nabaYili: I-ofisi yaseKhaya ePeter Horn kwikamva
Umsebenzi wobugcisa kaPeter Horn: UArico Q1: Molo, Peter Masenze intshayelelo emfutshane. A2: Molo, ndinguPeter Horn, ndiyile mveliso kwaye ndihlala eJamani. Usihlalo wefilo njengeprojekthi yam yokuqala yeGoodtone kunye neprojekthi yam entsha ngusihlalo wesikhumba weArico.Ndine studio yokuyila apha eG ...
Ibali loyilo lwe-ARICO Kwinkqubo yokujonga abathengi kwakhona, kwafunyanwa iimfuno ezintsha zeemarike. Ngokujonga okuqhubekayo kuphuhliso kunye notshintsho lwendawo yeofisi yasekhaya kunye nokuqokelelwa kwengxelo yabathengi, uGoodtone wafumanisa ukuba kukho ukunqongophala kwesitulo esibhityileyo sesikhumba esine-sen eyomeleleyo ...
Ngoku, ngenxa yefuthe lobhubhane, ukusebenza ekhaya kuyaqhubeka kuyinto eqhelekileyo kwabaninzi, kwaye ngale ndlela sinokuphepha ukuxinanisa ibhasi kunye nomgaqo ongaphantsi komhlaba ngexesha lokubaleka, kwaye sinokongeza iyure yokulala eyongezelelweyo. Ukusebenza ekhaya akuzizo zonke izibonelelo. Ukuba ucinga ukuba izakwenza ...
Ibali lethu laqala ngo-2008. Emva phaya sasibizwa ngokuba yiSitzone Furniture, umvelisi omncinci odibanisa izitulo zeofisi eFoshan, China. Ngo-2017, saphinda sabuyela kwiqela le-UZUO. Ishumi leminyaka elidlulileyo likubonile ukukhula kwethu ngokukhawuleza. Kule mihla sinee-sub-brand ezisibhozo kunye nabasebenzi abangaphezu kwama-2500 abasebenza kwisicwangciso sokuvelisa esi-3.
I-Guangzhou CIFF: I-GOODTONE ijonge phambili ekuzeni kwakho
I-CIFF Guangzhou Mar. 28 ~ 31 iGoodtone Booth No.:S9.3C08A CIFF Guangzhou 2021 izakubanjwa ukusukela ngomhla wama-28 ukuya kowama-31 kweyoKwindla, yefanitshala yaseofisini nosihlalo, ifenitshala yehotele, ifenitshala yesinyithi, ifanitshala yezithuba zoluntu kunye neendawo zokulinda, izincedisi, izixhobo noomatshini ukuze fu ...